Fitaovana fikojakojana orinasa, mpamatsy - Mpanamboatra ampahany amin'ny fikarakarana ao Shina
XCMG EXCAVATORS sivana rivotra XE335, XE370D, XE470D
Modely azo ampiharina XCMG XE335, XE370D, XE470D Fitaovana fikajiana Material name sivana Air Brand XCMG Origin Xuzhou sokajy sokajy Fizarana fizarana Main manual product manual Ity singa sivana ity dia napetraka ao anatin'ny sivana rivotra ary misy ny singa sivana rivotra ivelany sy ny singa sivana rivotra anatiny. Manasivana ny rivotra indrindra izy io mba hahazoana antoka fa madio ny rivotra miditra amin'ny motera
Sivana tsara lasantsy XCMG 800105252 XE700, XE700C
Manitatra ny tsingerina fanoloana, mitsitsy vola lany amin'ny fikojakojana, manitatra ny androm-piainan'ny motera, mampihena ny vidin'ny solika, mitazona ny fahombiazan'ny rafitra ary manatsara ny fahafahan'ny famokarana.
Sivana tsara lasantsy XCMG 800151006 XE60 XE60CA XE60D
XCMG sivana rivotra 800151018 800151019 XE60 XE60CA XE60D XE75 XE85C
XCMG sivana rivotra 800151024 800151023 XE75, XE80, XE80D
Sivana menaka XCMG 800156859 XE450 XE470 XE490
Sivana menaka XCMG 800151007 XE60 XE60CA XE60D
Ho an'ny: XE60 XE60CA XE60D XCMG singa fanasiana menaka fanodinana tany am-boalohany dia manome menaka madio amin'ny crankshaft, tsorakazo mampifandray, paingotra cam, turbocharger, peratra piston, sns aorian'ny fanesorana ireo loto manimba. Ny menaka madio dia hanosotra, hampangatsiaka ary hanadio ireo faritra ireo ary hanalava ny androm-piainany.
XCMG varingarina kitapo fanamboarana excavator feno varingarina rotary motera rotary rotary joint overhaul kit
XCMG faritra am-boalohany miaraka amina ozinina, faritra OEM avo lenta miaraka amin'ny vidiny lafo. Fandefasana entana amin'ny alàlan'ny express, entana an-dranomasina na fandefasana ranomasina ho an'ny filaharana lehibe.